Ogaden News Agency (ONA) – Mawqifka JWXO iyo waxay jecelyihiin isma-daboolayo
Mawqifka JWXO iyo waxay jecelyihiin isma-daboolayo
Waxaa meela kala duwan nalaga soo weydiiyaa waxyaabaha aan jirin ee nimankii u galay cadawga ee is-dhiibay marka ay ku riyoodaan ay dadka ugu sheegaan inay tahay arin dhacday. Dabeecdaha noocan ah waxaa lagu yaqaanaa qofka ka quusta wuxuu doonahayay oo marka uu ka caajiso khiyaalkiisa ku cabira ka dibna naftiisa sidaa ku maaweeliyo.
Waxaa ka mid ah khiyaalka ay iska dhaadhiciyaan oy jeclaan lahaayeen inay u rumowdo in ONLF ay afka saartay wadadii uu maray Ibraahim dheere oy maqlaan way soo xaroonayaan. Arintan waliba ma’aha mid hadda bilaabataye waxay salka ku haysaa markii Ibraahim dheere laga saxiixay inuu is-dhiibay oy Itobiya cadeysay inuu ka shalaytooday dambiyadii uu horey uga galay Itobiya kana codsaday in laga cafiyo taasoo ay sheegeen Berket Simon iyo masuulkii horee maamulka Jigjiga Dauud axmaar, waa isagii yidhi ONLF ayaan kaga hormarnay saxiixa oo wadahadal qarsoon kula jirta Itobiya. Waxaa la ogaaday inay beentan Itobiyab u sii dhiibtay ninkii isku xidhay mashruucan is-dhiibka Itixaadka waa Axmad nashaad, isaga ayaana ka gaday Ibraahim dheere ka dibna ay noqotay inuu madaxmadax isugu tuuro Adisababa isagoo leh kaga hormar Admiraalka intuusan imaanin. Waxaa midaa ka horeysay oon ogayn warkii beenta ahaa ee bil ka hor lagu qorayay shabakadaha Cabdi ilay uu masruufo ee lahaa waxaa lagu arkay Maxamad C. Cismaan Dhagaxbuur isagoo siqarinaya oo dhex socda.
Waxaa aad nasiibdarro u ah inay jiraan qaar u heelan inay maqlaan ONLF ayaa ugu tagtay Meles Adisababa. Usbuucyadii la soo dhaafay waxyaabaha lagu qoslo ay qoreen waxaa ka mid ah in shirkii uga socday Frankfort/Germany Hawl-wadeenka ururka iyo gudoonka JWXO ay yidhaahdaan Cabdifataax oo jooga halkaa ayay kula shirayaan. Cabdi ilay-na wuxuu joogay London oo lagula shirayaa.
Qofka u haysta in umadda Ogadenya ay ka liidato Wayaanaha oo aanay mudnayn in shuruudaha saxda ah ee caalamka u yaqaano wadahadal iyo heshiis uu halgankooda xaq u leeyahay ayaa isku maaweeliya beenta ay kooxdaa is-dhiibtay jeclaan lahaayeen inay u rumowdo.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya warsaxaafadeed ay soo saartey 2005tii ka dib markuu ka sheegay BBCda ra’isul wasaaraha Itoobiya 16kii iyo 17kii July 2005ta inuu diyaar u yahay wadahadal, waxay ONLF ku cadeysay mawqifkeeda ku aadan sidii dhibaatada dhex taala shacabka S.Ogadenya iyo dawladda Itobiya lagu soo afjari lahaa. Warsaxaafadeedkaa ilaa maanta wax iska badalay mawqifkii JWXO ma jiro, xukuumadda Itobiyana way ogtahay arintaa waana sababta ay luuqluuqyada kolba dhowr qof inaty uga kaxaysato ay u leedahay waa ururkii magacaa lahaa oon heshiis la galnay.
Warsaxaafadeedka JWXO ee taariikhdaa soo baxday ahna jidka hagi kara (The Road Map) wadahadal dhex mara shacabka S. Ogadenya iyo Itobiya wuxuu u qornaa sidan;
Hoggaanka arrimaha Dibedda
Bayaan Siyaasi ah
Khilaafka u dhexeeya soomaalida Ogaadeeniya ee ay jwxo hoggaaminayso iyo xukuumadda Itobiya waa mid siyaasadeed(political conflict)oo soo jiray muddo qarni ku siman, kaasoo leh xididdo taariikheed oo ku aroora xilligii ay Yurub hab gumaysi ah ku qaybsatay kuna qabsatay guud ahaan qaaradda Afrika gaar ahaan Geeska Afrika oo dalka Ogadenia ka mid yahay. Khilaafka Ogadenia oo ka dhaliyay Geeska Afrika dagaalo waaweyn 1964 iyo 1977, wuxuu halis galiyey nabada Aduunka kaas oo sababay in xooggaga-waaweyn isku hardiyaan gobolka Geeska Afrika 1977. Sidaa darteed Qadiyadda Ogadenia waa mid ka gudo wayn dastuurka dawladda Itoobiya maanta u yaalla.
Jabhadda Wadaniga ah ee xoraynta Ogaadeniya waxay mabda’ ahaan rumaysan tahay in habka wadaxaajoodka nabadeed uu yahay wadiiqaha ugu maangalsan uguna habboon ee khilaafkaas xal caadil ah oo waara loogu heli karayo, kaaso la hubo inuu dan u yahay dhinacyada iska soo horjeeda.
Sidaa darteed JWXO waxay soo dhowaynaysaa wada xaajood dhexmara iyada iyo dawlada Itoobiya, ka dib markuu baaqa ka soo yeeray ra’isul wasaaraha Itoobiya ee warbaahinta BBCda laga siidaayay 16kii iyo 17kii yuulyo 2005ta, waxayna mar kale dunida u cadeynaysaa:
1- Inay JWXO diyaar u tahay ka qayb galka wada hadal qadiyadda Ogadenia loogu raadinhayo xal caadil ah oo waara, kaasoo lagu qabto dal dhexdhexaad ah,haýad dhexdhexaad oo leh aqoonsi caalami ahina ay goob jooge ka noqoto,
2- Inuuna dhinacna shuruud hordhac ah ku xidhin wada hadlka oo labada dhinacba ay wada hadalka daacad ka noqdaan lana yimaadaan geesinimada lagama maarmaanka ah,
3- Inay cadaaladda iyo isxurmayntu yihiin furaha nabadda,xasiloonida iyo horumarka
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya
asc waxaan salaamaya xoogaga dalka ogadenia jwxo iyo dhamaan hogaamiyayaasha jiida hore ee dagaalka iyo hogaamiyayaasha siyaasada oo uu madax ka yahay admaraalka m.c.cismaan xafidahullaahu fii dunyaa wal aakhirah iyo dhaamn shacbka dulman ee s/ ogadenia iyo jaaliyadaha wacdaraha ka muujiyay kana hortagay tuugta khaniista uu zanaawi soo khaniisay ee soo tarhiibiyay boro bagaandhadii zanaawi iyo dhamaan shaqaalaha wakaalada wararka ogadenia ee soo gudbiya wararka runta ah qaybaheedakala duwan q/somaliga iyoq/englishka iyoq/ carabiga intaa kadib waxaa l wax lagu qoslo ah anoon kahadlaay nin nimankii sheegtay onlf ee saalix beenaale lkn kahadlaaya tuugta agoonta wax ku cuni jiray markuu laynkii agoontu isi soo xiray in aay ka ganacsadaan dhiiga shacbka dulman waxaan iisurta galayn wakhtigee lkn mar walbo waan soo dhamaystiri doonaa warar kooda horta waxaan leeyahay musalimatu alkadaab iyo culimada dhiini raaca ah waa shibile iyo umal iyo abuu xassaan iyo shakuul callool أف لكم ولما تعبدون من دون الله waa waxa aay caabudi ee zanaawi caabudo hadaad moodeen in aad duudsiyi kartaan xaqa shacabka reer ogadenia taasi ilooba waa la idin fahmay diinta in aad ku iibsateen aduunyo ood been iyo boro bagaandho aad kuwadaan xaqa umada reer ogadenia war xishooda oo faswada joojiya fatwadiinii waxay noqotay faswee hadaad moodeen in aad idinka diinka taqaanaan umada taasi beendheh anagaa diyaar u ah in aan umada reer ogadenia xaqooda usoo ridno mar walbana anagaa diintooda ku difaaci beenaalyaal muratziqah baldhajiyah idinkaa ah ku wax qaata wixii idinku qabsaday sodaan k/africa yemen iyo dhacdadii oogu danbaysay eed ka cararteen cumamadihii iyo sandalkii ee kenya waxaan leeyahay oo kale wabsaydyada aay ka midka yihiin waxaan sheegi kuwa oogu khaa in san waa ninka xaajo.com qora iyo dhanaan .com waa labada oogu muhiimsan ee bentoodu cadahay kuwa kalaa jira intaas ma ah kuwo kadaran baajira xageed ka keenteen in aad soo daabacdaan warka aan jirin xageed saxaafada ku bara teen mawaxaad moodeen in aan naan aqoon saxaafada hadaad moodeen in aad xaqa s/ogadenia duudsi kartaan saxafada taasi ilooba xaqa ogadenia hadaad 10 qarni aad soo daabacdaan ma qar soomi karo waxaan diyaar u ahay nimanka culimada sheegtay in aan munaadaro diini ah la galno meeshay doonaan aduunyada si xujada logu oogo amaa ninka nashaad layiraahdo miyaa waxaan ilaahay hortiisa ka qirayaa in uu ninkaasi waligii inta aayna is dhiibin in uu xidhhidh aad uwayla lahaa cadawga umada reer ogadenia na waxaan leeyahay umad yahay cadawgeedu ku soo noqday culimadii agoonta wax ku cuni jirtay ogaaada in maanta markii la waayay agoon ooy carabtii fahantay beentii wax lagu cuni jiray in maanta dhigiina lacabaayo waxaan warar dheeraad ah ka hayaa musaylimatu alkadaab iyo khaniistiisa in aay xirri lala haayeen ethopia 2006 kahor waxaa la iga hellaa cin waanka kor ku qoran ama taleefan lanbark 00967735567443 yemen sancaa arday jamacadeed kuliyada shareecada iyo qaanuunka iyo machad dibloomaa culuumu siyaasah
Allah (swt) wuxuu kitaabkiisa ku yidhi ” inahaa laa tacmal absaaro walaakin tacmal quluub alatii fi alsuduur”
Xaqnimada halgan ee shacabka soomaaliyeed ee reer Ogadenia wuu cad yahay waligiina wuu cadaa, waxaase arka cida uu ilaahay quluubtooda saaray ” basiiro”
Qalbiga xiqdi iyo xaasid buuxiyay hoy uma aha basiiro.
waad mahadsantihiin bahda ONA waxaad soo dhejiseen maqaal wanaagsan, waxaadna dib noo xusuusiseen mawqifka JWXO ee ku aadan xal u helidda qadiyadda Ogaadeeniya, iyo war saxaafadeedka taariikhiga ah ee soo baxay 18/ July 2005.
waa guul, damiir laawayaasha jecel JWXO dariiqooda inay qaadana way guul darraysteen, ilaahayna wan ka magan galnay sharka ay nala doonayaan.
Ogaadeenya way xoroobi, ONLF way adkaan ….